फेरि वामदेवको दाँतमा ढुंगा लाग्ने संकेत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फेरि वामदेवको दाँतमा ढुंगा लाग्ने संकेत
काठमाडौं । काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद रामविर मानन्धरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वामदेव गौतमका लागि बुधबारका राजनीति वृतमा देखिएका प्रतिक्रिया भने निराशाजनक देखिएका छन् ।
बर्दिया १ बाट काँग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग पराजित भएपछि रन्थिनएका वामदेव संसद छिर्नका लागि निकै प्रयासमा थिए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहयोगमा रामविरलाई मनाउन सफल भएपछि मंगलबार खुसी भएका वामदेव बुधबार भने चिसो पानीमा नुहाएको जस्तै बन्ने अवस्था आएको छ ।
शुरुमा वामदेव डोल्पाबाट उपचुनाव लड्ने भनियो, त्यसपछि ललितपुर त्यसपछि बाँके, त्यसपछि दैलेख । देशका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयास भयो । यी सबै क्षेत्रका स्थानीयले कडा विरोध जनाएपछि वामदेवका लागि निराशामात्र हातलाग्यो । तर, अध्यक्ष दाहालको प्रयासमा रामविर मैदान खाली गर्न तयार भए पनि पार्टी भने त्यसको विरोधमा जानसक्ने देखिएको छ ।
नेकपाका दोस्रो वरियताका नेता हुन अध्यक्ष दाहाल र वामदेव पाँचौ वरियताका । यी नेकपा भित्रका शक्तिशाली नेता हुन यिनीहरुको निणर्य असफल गराउने नेकपामा कसको हिम्मत भन्ने लाग्न सक्छ । तरm वातावरण त्यस्तो छैन । कुनै बेला अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र रहेका रामविर एकाएक दाहालमाफर्त राजिनामाका लागि तयार भएपछि ओली त्यसप्रति सकरात्मक नबनेको बुधबार उनी निकट नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।
बुधबार भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ रिपोर्टस क्वलमै पुगेर यो विषयमा बोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘रामविरको राजिनामाबारे पार्टीका कुनै निर्णय भएको छैन । वामदेवले चुनवा लड्नै पर्छ भन्ने पनि छैन ।’
यो भनाई पक्कै पनि वामदेवका लागि शुभ संकेत होइन । र यो महासेठको बोलीमात्र नभएर ओलीको पनि मनोभावना हुनसक्छ । किनभने महासेठ ओलीका विश्वास पात्र नेता हुन् ।
त्यसो त माधव नेपाल पक्ष पनि वामदेवको चुनाव लड्ने हठसँग त्यति खुसी छैन । नत्र भने बुधबार उनी निकटका नेताहरुले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिने थिएनन् । बुधबार एक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा नेता भीम रावलले वामदेव किन चुनाव लड्नु पर्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले यो विषयमा स्थायी कमिटिमा छलफल हुुनुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन् वामदेवलाई संसद छिराउने योजनाका ड्राइभर अध्यक्ष दाहाल स्वयम आफ्नो निर्णयबाट पछाडी फर्कने संकेत देखिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘पार्टीले सिट गुमाउने गरि उपनिर्वाचनमा जाँदैनौं ।’
उनको यो भनाईको अर्थ के हो ? के वामदेवले काठमाडौं ७ मा चुनाव जित्छन् भन्ने ग्यारेण्टी छ ? पक्कै पनि चुनाव हो ग्यारेण्टी हुने कुरै भएन । त्यसमाथि वर्तमान अवस्थामा सरकारको जताततै आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरका मयेरको पनि अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । अँझ नेकपा भित्रै यो विषयले विश्वासको संकट निम्त्याएको छ ।
वामदेवले किन संसदमा जानुपर्ने हो, त्यसको जवाफ दिन सक्ने कुनै कारण छैन । यस्तो प्रतिकुल समयमा उनले चुनाव जित्छन् भन्ने सामान्य आँकलन गर्नुपनि कठिन छ । यस्तो हो भने के अध्यक्ष दाहाल आफ्नो निर्णयबाट पछि फर्किन लागेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
बुधबार आएका प्रतिक्रियाबाट नेकपा भित्र पनि रामविरको राजिनामा र वामदेवको उम्मेदवारी कसरी बचाउ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला । र चुनावै नजितिजे नतिजामा नेकपा पुग्यो भने संसद छिर्ने वामदेवको योजनामा फुलस्टप नै लाग्नसक्छ । यदि यस्तो भयो भने वामदेवको दाँतमा अर्को ढुंगा हुनेछ ।